What is Life? ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » What is Life? ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ
Posted by manawphyulay on Aug 3, 2011 in Creative Writing, Short Story |9comments
မိတ်ဆွေရဲ့ အမြင်လေးကို သိပါရစေ
Life is short. ဘ၀ဟာ တိုတယ်တဲ့။ အသက်ရှည်နေတယ်ဆိုရင် ဘ၀ဟာ မတိုပါဘူး။
Life is Dream. ဘ၀ဟာ အိပ်မက်ပဲတဲ့။ အဲဒါလည်း ဖွဲ့နွဲ့ခံစားပြောတာပါ။ ဘ၀ဟာ အိပ်မက်မဟုတ်ဘူး။ အိပ်မက်က အကောင်အထည်မရှိဘူး။ ဘ၀က အကောင်အထည်ရှိတယ်၊ လက်တွေ့ရှိတယ်။
Life is always full of struggle. ဘ၀ဟာ အစဉ်အမြဲ ရုန်းကန်နေရတယ်တဲ့။ အဲဒါကတော့ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ မိခင်ဝမ်းထဲက ထွက်ကတည်းက ဘ၀ဟာ ရုန်းကန်နေရတာပဲ။ မွေးစကတည်းက ရုန်းကန်ရတာ သေတဲ့အထိဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဘ၀ကို လှော်တက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သာ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတာပါ။ ကဲ မိတ်ဆွေကော ဘယ်လို မြင်လဲ….
ဘုရားဟောတာကတော့ ဘ၀ရှိလာရင် ဒုက္ခဆိုတာရှိတာပဲတဲ့
Life is struggle အမှန်ဆုံးပဲ
ကိုယ် ကတော့…..ဘ၀ ဆိုတာ ဘာလဲ..လို့မမေးတော့ဘူး။ ဘ၀ တစ်ခု ကိုရခဲ့ ပြီ။ အဲဒီ ..ရထားတဲ့ ဘ၀ မှာ ဘယ်လို ရှင်သန်နေထိုင်သွားမလဲ….။ နေထိုင်ခဲ့ ရတဲ့ဘ၀ တစ်လျှောက် မှာ..ဘာတွေကို ဘယ်သူတွေ အတွက် ချန်ခဲ့ မလဲ…..။
အဲဒီ လိုပဲ ကိုယ့် ဘာသာ..မေးနေမိပြီ။
အဲဒီလိုမေးမိတာလည်း ဆ၇ာတော် ဥိးဇောတိက ရဲ့ဘ၀ဆိုတဲ့ ကျောင်း စာအုပ်ကလေးကို ဖတ်ပြီးချိန်ကမှ စပါတယ် ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲ မှာက ဘ၀ တစ်ခုကို ရတော့ မယ့် သူ ( လူ့ ပြည် ကိုသွားရတော့မယ့် သူ)ကို
မှာနေတာ…။ အချက် 10ချက်နဲ့ ..။ 1 က ခန္ဒာ တစ်ခုကိုရမယ်။ အဲဒီ ခန္ခာကို မင်း ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ် ။ ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်မယ် ..ဒါပေမယ့် ဒီဘ၀ အတွက်တော့ ဒီ ခန္ခာ ဟာ.. မင်း ခန္ခာ ပဲ…တဲ့ ။အချက် နံပါတ် 10 က ဒီလို မှာလိုက်တာတွေကို ..မင်းမေ့ သွားလိမ့်မယ်. …တဲ့ ။
ကိုယ်တော့ အဲဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး မှာ ဘ၀ ကို ပို တန်ဖိုးထားတတ်သွားပါတယ် ။
I wanna say like that…….
L I F E is catergorized into three parts. First is “L”. Second is ” IF”. The last is E.
“L” stands for “living”. “IF” stands for “possibility or hope or expectation” and so on.”E” stands for “ending” or “the end”. So, LIFE is “Living goes through “IF” and generates “Ending”.
Do you argue that you are living for “your “IF” ?
ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ ဒီလို အရွယ်
အခု မင်းသိရဲ့ လား မကောင်းတဲ့ စိတ်ရဲ့ အတွေး ( အက်ဆစ် ) ။
အသေအချာ အလေးအနက် မသိချင်ပါ ( လေးဖြူ ) ။
ဖြစ်ချင်တာလည်း မဖြစ်ကြရပါ ၊ ဘ၀ သံသရာ ( ဘဘ ဒေါက်တာ ဦးသုခ )
ဘ၀က ဘနဲဝ ပေါင်းထားတာပါ စကားလုံးအနေနဲ နှစ်လုံးထဲပါ
ဒါပေမဲ ရှုပ်ထွေးမှုအပေါင်းနဲ ပြည်နက်နေတာဘ၀ပါ
ဘ၀ကို အရိုရှင်းဆုံးဖြတ်သန်းချင်နေသော်လည် ရှုပ်ထွေးမူတွေနဲ
မွေးတာကနေ သေတဲ့အထိ ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပဲတဲ့………………………
ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဘ၀ဆိုတာကတော့ အမျိုးမျိုးပါဘဲ.. တစ်ခုက လူတစ်ယောက်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းဆေး.. သေတဲ့အထိ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပင်ပန်းမဆင်းရဲ့တဲ့ဘ၀ကျတော့ ချောမွေ့တဲ့ဘ၀.. တစ်ချို့ကျတော့ မွေးကတည်းက ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲ ချို့တဲ့နေရတဲ့အထဲ သေတောလည်းကားတိုက်သေ.. မြွေကိုက်သေ အဲဒီဘ၀ကျတော့ ခရီးကြမ်းတဲ့ဘ၀ .. ဘာပဲပြောပြော.. ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုမှုနေထိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်လို့ထင်တာပါပဲဗျာ..